Lapho iThames kwemali, futhi lokho kuyinto
IThames - umfula, enikezwe inhloko-dolobha yase-UK. Yena kubhekwa ngunina wabo bonke emifuleni British. Naphezu kweqiniso lokuthi akuyona ende futhi singacebile, zonke lezi zinganekwane iyihlanganise naye. Ngokuthakazelisayo, lobo iyiphi eyiNgisi uyobe uphendula wena ukushisa eMfuleni iThames - umfula esithandayo.
Omude kunayo yonke owake noma cha
IThames obuphelele kufana nokuthi 215 amamayela. Ngo zokubala kabusha ku amakhilomitha yethu - kuyinto 346. ENgilandi, ubhekwa isikhathi eside, futhi kuthatha kuphela endaweni yesibili e-UK.
Abaningi bayazibuza lapho uMfula iThames kwemali, kodwa ososayensi namanje angeke eze ukuvumelana mayelana ngomsuka wayo. Abanye baphikisa ngokuthi onjalo iThames Shona, ababesenethonya umsindo yokuhumusha, "inhloko yawo iThames." Ungumthombo eliseGloucestershire.
Eningizimu, le ndawo edolobhaneni okuthiwa Campbell. Uma uhamba kuwo kuyo inyakatho, ungakwazi siyakhubeka phezu Cotswolds amagquma. Abanye ososayensi bakholelwa ukuthi umthombo iThames uqala lapha njalo sibizwa ngokuthi Keys Eziyisikhombisa. Lena ukuphela kwendawo lapho siqala baphathe amanzi emfuleni yabo emnyama. Uma lena umbono ososayensi nabacwaningi kuyiqiniso, kwangempela iThames obuphelele inyuka ngo 15 amakhilomitha. Kulokhu, emlonyeni intando okukhipha emfuleni edume ngqo eNorth Sea, enikeza impendulo yombuzo othi mayelana lapho uMfula iThames ageleza.
Ososayensi phikisana ukuphi umthombo akuyona onyakeni wokuqala. Phela, uma Ukuqagela yesibili ilungile ke iThames ubude 368 amakhilomitha, okuyinto kakhulu idlula ubude Severn, manje ubizwa ngokuthi zonke nomfula omude kunayo.
IThames eLondon ubhekwa umhlengikazi dolobha lonke lase UK. Ngokuvamile, ukubaluleka kwalo ngokomlando ngenxa yokuthi athwala amanzi awo wawunqamula eLondon, okuyinto umxhwele ulwandle port.
Kuyathakazelisa ukuthi umfula yakhiwa izindawo lapho amanzi ahlanzekile futhi okunosawoti ngesikhathi esifanayo. Lezi ziqhingi oluhlaza abacebile yezimila nezilwane ezihlukahlukene. Umfula seliphindeke izikhathi ezingaphezu kuka-20 nemingenela - imifula nemifudlana ukuthi baphathe amanzi abo lapho, lapho uMfula iThames notshwala.
Lokhu ingeminye UK ngaso sonke isikhathi ayebhekwa thoroughfare main, enikezwe izindlela zokuhwebelana namanye amazwe. Ngakho kwaba ngaso sonke isikhathi isimo, luhlala ngisho kwamanje.
ELondon, eMfuleni iThames kudlala indima enkulu. Akekho noyedwa umhlali inhlokodolobha awukwazi ukucabanga ukuphila ngaphandle kwamanzi alo. Lihlobene nokubhekana ubuso izenzakalo eziningi zomlando.
Ngokuthakazelisayo, ososayensi abaningi bathi lutho kodwa "indaba uketshezi." Le ncazelo ibonisa ngokunembile ngokuthi "ukuphila" iThames, okuyinto ku ekhulwini "oboné" okuningi.
Ngo emfuleni uhlala lenqwaba izilwane nezinyoni: surface futhi kwamanzi. Lapha ungathola seagull kanye cormorants ukuthi esidlekeni loMfula iThames ezibhuzayo.
Umfula siyindawo ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi yokwakha isidleke. Minyaka yonke ahlelwe iholide "yokubala abantu" zalezi zinyoni. Swans-bengabahlebayo ukuhlangabezana eLondon ubhekwa kwaba nempumelelo enkulu, kodwa abamnyama ozakwabo musa abangele ukumangala.
ngomusa iThames inikeza ngasogwini lwalo ngoba coot lokushutheka namahansi, Mandarin amadada izindwandwe, Amadada nezinye izinyoni.
Izinhlanzi iThames izimpilo eziningi - nezasolwandle. Lokhu likhomba emfuleni njengoba ukujula nezilwane.
Lapho iThames kwaduma
Ngamunye wethu babekade bezwile ngeSikole Umthambo London, uyazi lapho notshwala iThames okuyinto ethatha lwaluvelaphi. Kodwa akubona bonke abantu uyazi ukuthi nemizana kuqale ukuvela ngasogwini lwalo kudala njengoba iminyaka 3300-2700 BC. Lokhu kufakazelwa enjalo imizi yasendulo efana Cookham futhi Lechlade.
Kukhona umbono wokuthi abantu bokuqala babehlala lapha emuva kwesikhathi pre-glacial, kodwa evumelana eyaziwa kuphela iThames.
Ngo imithombo ebhaliwe, umfula yokuqala okukhulunywa ngayo BC wama-54. Lawa kwakungamadodana imikhankaso Yuliya Tsezarya. Khona-ke, yoMfula iThames uhlobo ngemincele kwamaRoma bendawo isiqhingi isizwe.
London mfula edonsela abaculi, izimbongi, ababhali kanye abaculi. yobuciko zabo eziningi zingatholakala emhlabeni wonke. Indawo lapho uwela iThames (umfula), futhi manje kubhebhethekiswe ngu zinganekwane eziningi kanye izimfihlakalo. Ezinye ziye zabangelwa abantu bendawo wadlula ngomlomo inzala, kuyilapho abanye - bavela ngokwabo zifiki.
IThames ngezansi inhlokodolobha iyindawo yokugogobala ka izindela. Bona ukuheha kokubili izivakashi bayathanda ukuphumula asebenzayo.
Kuyathakazelisa ukuthi izakhiwo ezinjalo ezinkulu ezisemadolobheni of London, njengoba Tower of London kanye Westminster Palace, kukhona efanayo umugqa oqondile ezakhiwe yoMfula iThames.
Labo izivakashi bayathanda izikhumbuzo zomlando kanye izinto ezithakazelisayo kuyoba ukwazi ukuthi phezu loMfula iThames kuyinto omningi onjalo. Lezi zihlanganisa i-University of Oxford, okuyinto omunye omdala e-Europe. Tower yayithathe ngaphesheya komfula, London, Hammersmith, Vauxhall amabhuloho okuye elalizokwakhiwa e nekhulu le-19 nelesi-20 leminyaka. ukwakhiwa yanamuhla Millennium Bridge, elakhiwa ngo-2002, kanye isondo Ferris wabiza "London Eye" ka-1999.
Angisoze ngakukhohlwa engakufunda laphaya uyoletha uhambahamba port Victoria Embankment, London. Ungakwazi ukubheka iRoyal Observatory, noma vakashela i-yaseshashalazini "Globe".
Yini ukutadisha amafonethiki futhi orthoepy? Yini okudingeka ufunde amafonethiki?
Berezina (umfula): incazelo kanye nomlando. Berezina River kumephu
Ukuphepha oku ski ukuqeqeshwa amakilasi. Inhlangano ye-ski ukuqeqeshwa izifundo esikoleni
Yukon River e eNyakatho neMelika: isithombe, incazelo
UPlato Karataeva isithombe noveli "Impi Nokuthula"
Indlela ukufaka Samsung Pay ifoni
Ushukela umchamo. Kusho ukuthini?
Sciatica: Ukwelashwa Sciatica
Izithobe ze-endocrine zomzimba womuntu: izici ze-anatomophysiological kanye nokubaluleka kokusebenza
Indlela ukususa ngemvume ku "Ofunda nabo" emnyango: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Yini ukugqoka indoda club kanye nowesifazane?
Amaphilisi i isicanucanu - ukuhamba kahle.
Zohlobo ongaqondakali kunayo amakati - Sphynx
Alexander belousov - jikelele engcono yebutho Russian
Umlando uMarvin uMarvin Heemeyer. Impi uMarvin uMarvin Heemeyer